Huawei Nova 5T: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
A gbanwere usoro Nova nke Huawei na afọ a na ụdị ọhụụ. Chinesedị akara ndị China ahapụla anyị Nova 5 na 5 Pro, E wezụga nke Nova 5i . Site na ihe ijuanya, anyị nwere ekwentị ọhụrụ ugbu a n'ime ezinụlọ nke ngwaọrụ a. Ọ bụ ihe gbasara Huawei Nova 5T, nke bụ ekwentị nke akpọsaara izu gara aga, dị ka mbipute nke Honor 20.
Nke a Huawei Nova 5T bụ nsụgharị gbanwere nke Honor 20. Anyị nwere ike ịhụ na ha nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ọnụ, mana enwere ọtụtụ iche na nkọwa ha. Ọ bụ ezie na atụmatụ ahụ agbanweghị agbanwe na nke a, naanị na a tọhapụrụ ya n'okpuru akara kachasị na nke a.
Imewe adịghị ewetara anyị mgbanwe, belụsọ maka imecha dị iche na azụ ya. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ na oghere na-echere anyị na ihuenyo ya, nke na-enye ohere panel nke na-eji ohere zuru ezu n'ihu ekwentị. Na azụ anyị hụrụ ese foto anọ. Ihe mmetụta mkpịsị aka ekwentị ahụ dị n'otu akụkụ ya, dị ka Honor 20.
Huawei Nova 5i Pro: Nsụgharị mba ofesi nke Mate 30 Lite
1 Nkọwapụta Huawei Nova 5T
Nkọwapụta Huawei Nova 5T
Akara ndị China na-ahapụ anyị ezigbo ekwentị n'ime oke ya na ihe nlereanya a. Huawei Nova 5T bụ ekwentị dị ike, nke nwere ọgbara ọhụrụ na nke ugbu a, ebe igwe foto ya kacha pụta. Obi abụọ adịghị ya na ha bụ otu n'ime ike nke ngwaọrụ ahụ, nke bụ ihe ndị ahịa na-abawanye ụba na ekwentị. Ọ na-ejigide isi ihe anyị maara banyere Honor 20, mana yana mgbanwe ụfọdụ. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ngosipụta: 6,26-anụ ọhịa LCD na Full HD + mkpebi nke 2340 x 1080 pikselụ
Nchekwa dị n'ime: 128 GB (Gbasaa na microSD)
Igwefoto na-esote: 48 MP nwere oghere f / 1.8 + 16 MP na oghere f / 2.2 + 2 MP nwere oghere f / 2.4 + 2 MP nwere oghere f / 2.4
Batrị: 3.750 mAh na Fastkwụ 5gwọ 4.5V9A / 2VXNUMXA
Sistemụ nrụọrụ: A gam akporo na EMUI 9.1
Njikọta: Dual SIM, 4G / LTE, Wi-Fi b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, USB-C
Ndị ọzọ: Mkpịsị aka mkpịsị aka n'otu akụkụ, NFC
Akụkụ: 154,25 x 73,97 x 7,87
Huawei Nova 5T bụ ekwentị dị ike, nke na-eji Kirin 980 dị ka ihe nhazi ya. Na mgbakwunye, ọ na-ahapụ anyị na RAM nke 8 GB na 128 GB nke nchekwa, ka anyị wee nwee ike ịtụ anya arụmọrụ dị mma site na ngwaọrụ na nke a. Batrị ahụ nwere ikike nke 3.750 mAh, nke na-ahapụkwa anyị na ngwa ngwa ịgba ụgwọ. Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka dị n'otu akụkụ ya ma bịa na NFC iji nwee ike iji ekwentị kwụọ ụgwọ ekwentị, ọrụ nke ndị na-azụ ahịa na-anabata mgbe niile.
Igwefoto bụ otu n'ime ike ya. O nwere igwefoto azụ anọ, nke ihe mmetụta 48 MP na-achịkwa ya dị ka isi. Tinyere ya anyị nwere ihe mmetụta ndị ọzọ, nke ọ bụla nwere nzube dị iche, dị ka ihe omimi miri emi dịka ọmụmaatụ, maka ezigbo ihe mmetụta nke ihe mmetụta dị n'echiche a. Akara ndị China na-ahapụkwa anyị nwere ọgụgụ isi iji bulie ọrụ nke igwe foto ya niile. A na-eji otu ihe mmetụta 32 MP n'ihu na nke a, nke doro anya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ọ bịara na-ewere selfies.
Maka ugbu a ekwuputala ekwentị a na Malaysia ọ dị ka ọ bụ ga-ebido n'oge na-adịghị anya na nke a na ahịa ndị ọzọ na Asia. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ozi ọ bụla ugbu a banyere mbido mba ụwa nke Huawei Nova 5T a. Anyị ga-echere ụfọdụ akụkọ sitere na ụlọ ọrụ ahụ n'oge na-adịghị anya. Obi abụọ adịghị ya, ọ nwere ike ịbụ ekwentị na-amasị ọtụtụ, ọ bụ ezie na oyiyi ya na Honor 20 nwere ike ịkwado mwepụta ahụ.
N'ihe banyere Malaysia, a ga-ewepụta ya na Septemba 5. A malitere Huawei Nova 5T n'otu ụdị, nke na-abịa na ọnụahịa nke ihe dị ka euro 330 ịgbanwe. Enwere ike ịzụta ya na acha anụnụ anụnụ, odo odo na oji. Ya mere, ndị nwere mmasị ga-enwe ike ịmatakwu banyere ụdị a, anyị na-atụ anya ịnweta ozi gbasara mbupụta mba ụwa. Kedu ihe ị chere gbasara ụdị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei Nova 5T: Ekwentị ọhụrụ na mpaghara Nova